Ayini amachweba amakhulu eNdiya? | Ukuhamba kwe-Absolut
Namuhla sizovakashela i- amachweba abaluleke kakhulu eNdiya. Ake siqale ngokusho iziqhingi zase U-Andaman noNicobar, okuvumela ukushintshaniswa kokuthengiswa olwandle namazwe afana ne-Indonesia neThailand. Iziqhingi i-Andaman neNicobar zitholakala e-Indian Ocean, ikakhulukazi eBay of Bengal.
Kufanele futhi sisho igama le- I-Chennai, owaziwa nangokuthi iMadras, idolobha eliyitheku eliseningizimu yeNdiya, esifundeni saseTamil Nadu. Kuyaphawuleka ukuthi ithathwa njengechweba elikhulu kunazo zonke eBay of Bengal.
Cochin idolobha eliyitheku elisendaweni yaseKerala futhi ligezwe uLwandle lwase-Arabia. ICochin ithathwa njengelinye lamachweba amakhulu esizweni. Kusuka lapha izinongo ezibaluleke kakhulu zithunyelwa kwamanye amazwe.
Kubalulekile futhi ukukhomba Bharuch, idolobha eliyitheku elisesifundazweni saseGujarat, elidume ngokuba yiphuzu elibalulekile kwezentengiselwano zasendulo zamaRoma neNdiya.
Bombay I-Mumbai idolobha eliyitheku elisesifundeni saseMaharashtra futhi eligezwe uLwandle i-Arabia. Uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi ithathwa njengechweba elibaluleke kunazo zonke ezwekazini njengoba linama-40% wezimoto zakwamanye amazwe.
IMachilipatnam idolobha eliyitheku elisesifundeni sase-Andhra Pradesh. Kuyaphawuleka ukuthi idolobha laliyitheku elibalulekile lokuhweba kweFrance, iBrithani kanye neDashi ngekhulu le-350. Namuhla inetheku lokudoba elinamandla wezikebhe ezingama-XNUMX.
Ekugcineni kufanele sisho Visakhapatnam, elinye idolobha eliyitheku esifundazweni i-Andhra Pradesh.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ayini amachweba amakhulu eNdiya?